Qonnaan bultoota Koyyee Faccee fi Boolee Arraabsaa: 'Lafa keenyas dhabnee ijoolleen keenyas daandii irratti hafte' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Mayor Office of Addis Ababa
Qonnaan bultootni ganda Koyyee Faccee fi Boolee Arraabsaa ijaarsa manneetii kondominiyeemiif jecha lafa oomishaa isaanii dhaban mana qonnaan bultootaaf dursi kennama jedhame homaa hin dhageenye jedhan.
Jiraataan naannoo Boolee Arraabsaa BBC'n dubbise tokko waanta qonnaan bultootaaf dursi kennama jedhamu ilaalchisee odeeffannoon nutti himame tokko iyyuu hin jiru, afaan isaanii irraa waan dhageenye hin qabnu jedhan.
MM Abiy pireezidantoota Somaaliyaa fi Keeniyaa 'araarsan'
'Haroo Qooqaa Booceen nurraa fudhataa jira'
Itti Aanaan Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Obbo Taakkalaa Uumaa ijaarsi manneetii dandeettii qofa osoo hin taane sammuudhaanis itti yaadanii hojjechuu gaafata jedhan.
Naannaa Finfinnee dabalatee magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeefamuu akka jalqabe himamaa jira.
Yeroo sana Obbo Taakalaa Uumaas haalicha balaleffataa kan turan yoo tahu fincilaa fi haaromsa akka biyyaatti dhufeen gara muudamichaatti akka dhufanis ni beekama.
Projektiin waggaa sadiitti xumuramu har'a eegale kun laggeen magaalaa Finfinnee isaan gurguddaa lama kan walumaagalatti kiloomeetira 51 ta'u dheeratan irratti hojjetama.
Namoota kuma 50 daandii irra jiraatan kaasuuf fandiin deeggarsaa jalqabee jira.
KALLATTIIN Gareen abukaatoo Jawaar Mohaammad akka hin argine dhorkamuu himan
Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Mohaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufillee wayita deemanitti Jawaar dubbisuu akka dhorkaman himan.
''Kottaati akkuma Hacaaluu hanga du'aatti qabsaa'aa''
Qorichoonnii Covid-19 karaa seeraan alaa gabaarra oolaa jiru
Qorichoonni dhukkubsattoota Covid-19 lubbuu baraaru jedhaman remdeziviir fi tookilizumaab Indiyaa keessatti karaa seeraan alaa gabaarra ooluun gatii miyaa ta'een gurguramaa jiraachuu qorannoon BBCn taasise mul'iseera.
Dhukkuboonni bineensotarraa namatti dabran dabaluun yaaddoo uumaa jiran